Plumeria · Hawaiian Sanctuary: I-Spa, isikhungo se-yoga & ushokoledi P - I-Airbnb
Plumeria · Hawaiian Sanctuary: I-Spa, isikhungo se-yoga & ushokoledi P
*, Hawaii, i-United States
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Hawaiian Sanctuary
I-Plumeria Room (#2) ingelinye lamakamelo ethu amane anethezekile phakathi kwepulazi lethu elihle nendawo engcwele. Leli gumbi lihlanganisa i-latex, umatilasi wendlovukazi wamahhala, ikhabethe elivulekile, usinki, izindawo zokulala ezimbili, ifeni yophahla kanye nomnyango onengilazi eshelelayo. I-wifi yasendlini. Ukugeza okunethezekile okwabiwe kanye ne-spa ephelele kuyizinyathelo ezimbalwa nje lapho ungakhetha khona izihlambi zamanzi ashisayo zasendlini noma zangaphandle, i-sauna ye-infrared kanye nobhavu oshisayo we-ozonated.
Izivakashi ziyakwazi ukufinyelela ku-spa yethu (i-ozonated hot sauna ne-infrared sauna), ijimu yokuzivocavoca umzimba mahhala, amagumbi okugeza ahlanganyelwayo, amakilasi asendaweni, amashawa angaphakathi nangaphandle, indawo yokuphumula yomphakathi ene-elixir bar, kanye nempahla evulekile. I-WIFI yamahhala inikezwe endaweni yokuphumula, ***inothi: sine-bandwidth elinganiselwe ngenxa yemikhawulo yesathelayithi EJONGLE.
Lalela umsindo wegobolondo le-conch for smoothie yakho yokuphila kahle yasekuseni phakathi kuka-8:30 no-9:30am, esetshenziswa ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Izidlo zethu zokudla kwemifino epulazini ukuya etafuleni zilungiswa kusukela ezweni umpheki wethu omnandi futhi zitholakalela izivakashi zethu ngo-$12 ngesidlo sasemini ngasinye. Sinikeza izinketho eziningi zokudla okungaphekiwe futhi sithanda impilo, ubungqabavu, nokubuyela emthonjeni wokudla kwethu. Sizizwa sijabule kakhulu ukwabelana ngalokhu nezivakashi zethu.
Ikhishi lethu lomphakathi nalo liyatholakala ukuze ulisebenzise, futhi ibanga elingaphansi kwekhilomitha kunezindawo zokudlela ezinhle ezihlukahlukene.
Ibungazwe ngu-Hawaiian Sanctuary
Njengoba idethi yokubhukha kwakho isondela, sicela usazise i-ETA yakho ukuze sibe nomuntu okubingelelayo futhi akubonise igumbi lakho. Ungase futhi uthinte uMike: (808) 345-4478 ngokuqondile ngombhalo noma ngocingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- * namaphethelo